Aza mihazakazaka amin'ny sabatra plasma | Vaovao IPhone
Ny lalao izay itondrako anao anio dia tena izy avy amin'ny lohateny manokana hoe "Aza mihazakazaka amin'ny sabatra Plasma", izany hoe "Aza mihazakazaka amin'ny sabatra plasma." Momba ny a lalao Retro na fiotazam-boaloboka, araka ny itiavanao azy fatra vazivazy fatra ary tantara iray izay ny irakao dia ny hanavotra ny zanak'olombelona.
Ny hazakazaka, ny ady, ny ady, ny haavo hainganana avo lenta ary ny ambaratonga vitsivitsy dia mamaritra ity lalao ity izay mamaritra ny tenany ho "fanomezam-boninahitra mahatsikaiky ny sarimihetsika sci-fi Retro."
Kornelio no tompon'andraikitra amin'ity tantara ity, ny Mpanoratra fivarotana tantara an-tsary eo amin'ny manodidina izay nanonofinofy ny ho lasa maherifo amin'ny fiainany rehetra mandra-pahatongan'ny hetsika tsy ampoizina sy tsy ampoizina dia hitondra anao ilay fotoana tadiavinao sy nandrasana hatry ny ela.
"Aza mihazakazaka amin'ny sabatra Plasma" dia a lalao manerantanyl mifanaraka amin'ny iPhone sy iPad izay hahitanao fomba lalao roa. Amin'ny lafiny iray ny «mode mode», miaraka amin'ny fivoarana miandalana, ady, filaharana ary maro hafa; etsy ankilany, "mode tsy misy farany" misy ambaratongam-pahasarotana efatra, tanjona hotratrarina, fandrosoana amin'ny sarintany, sns.
Ary koa, mivelatra ny tantara scenario dimy samy hafa (ny tanàna, ny orinasa, ny reny, ny planeta vahiny ary ny volana Tandoori), noho izany ianao dia hankafy bebe kokoa ny sary mahafinaritra retro.
Hetsika haingam-pandeha, vazivazy maro, fanaraha-maso tsotra hitsambikinana, fivezivezena, fitsambikinana indroa, fandrika maro hialana, valisoa azo hanangonana, ary fiatraikany tsara dia sasany amin'ireo fiasa izay mitarika antsika hanolotra ity lalao tany am-boalohany sy mampiala voly ity. ...
Aza mihazakazaka amin'ny sabatra Plasmamaimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Aza mihazakazaka amin'ny sabatra plasma
Manatevin-daharana vondrona firenena vitsivitsy miaraka amin'ny mombamomba ny fitateram-bahoaka ao amin'ny Apple Maps i Irlandy
CarPlay dia "tsy maintsy ananana" ho an'ny mpampiasa iPhone